(၁၁) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကျင်းပ | Myawady Webportal
(၁၁) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကျင်းပ
(၁၁) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်း အဝေးကို ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပါဝင်တက်ရောက်သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Prak Sokhonn နှင့် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး H.E. Dr. Subrahmanyam Jaishankar တို့က ပူးတွဲသဘာပတိ များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး အခြားမဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ် ကြသည့် လာအို၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ပါဝင်တက်ရောက် သည်။
အစည်းအဝေးမစတင်မီ ဝန်ကြီးများသည် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဗီဒီယိုနမူနာကို ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ ဝန်ကြီးများသည် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဦးစားပေးကဏ္ဍ များ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို သုံးသပ်ဆွေးနွေး၍ အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အမြင် ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မဲခေါင်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင်က ဆွေးနွေးရာ၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတိုက်ဖျက်မှုအတွက် ဆေးပစ္စည်းအကူအညီများ ပေးအပ်မှု၊ ဘာသာရပ် နယ်ပယ်အသီးသီး၌ ပညာသင်ဆုများ ထောက်ပံ့ပေးနေမှု၊ ငလျင်ဒဏ်ခံစားခဲ့ ရသည့် ပုဂံဘုရားများ ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဗုဒ္ဓဂယာ၌ မင်းတုန်းမင်းနှင့် ဘကြီး တော်မင်းတို့ တည်ထား ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်ဘုရားပုထိုး ၂ ဆူ ပြန်လည်မွမ်းမံ ရေးအပါအဝင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေ မှု၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မြန်ဆန်စွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့် စီမံကိန်း (QIPs)(၅)ခု ပေးအပ်မှုနှင့် Lines of Credit ပေးအပ်ကူညီပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များအကြား ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို နီးကပ်စွာနှင့်နက်ရှိုင်း စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ (၂၁)နှစ်တာ ကာလ အတွင်း သိသာထင်ရှားသည့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေမှုအပေါ် အသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်အောက်၌ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး၌ (၁၁) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး၏ ပူးတွဲကြေညာချက်ကို အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့ပြီး မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၉-၂၀၂၂) ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အစီရင် ခံစာနှင့် မြန်ဆန်စွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့် စီမံကိန်း (QIPs)စာရင်းများအပေါ် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။
မဲခေါင်-ဂင်္ဂါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ဒေသတွင်းလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဒေသတွင်းပြည်သူများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့်ဆက်နွှယ်မှုများ တိုးမြှင့်လာစေရေး တို့အတွက် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၌ လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်း မြို့တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မဲခေါင်ဒေသခွဲနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊မြန်မာ၊ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရသည်။